Hoos u dhigga Marmaray iyo lambarrada safarka ee loo yaqaan 'YHT' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraHoos u dhigga Marmaray iyo lambarrada Safarka ee YHT
21 / 03 / 2020 06 Ankara, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
Waxaa loo qorsheeyay in la dhimo tirada duullimaadyada marmaray iyo yht
TCDD Tasimacilik waxay qorsheyneysaa inay yareyso tirada safarada ee Marmaray iyo YHT. Isagoo sheegay in dhaqdhaqaaqa rakaabka iyo baahida si dhow loola socdo, ilo wareedyo ayaa sheegaya in abaabulida tirada safarada ee la jaan qaada xaaladda cusub ay ajandaha saaran tahay. Marka loo eego, tirada safarada ayaa dib loo habeyn doonaa.
HaberturkSida ku xusan warbixinta Olcay Aydilek oo ka socota; “Marmaray, tirada rakaabka ee la qaaday kahor coronavirus wuxuu u dhexeeyay 450 illaa 460 kun maalin kasta. Iyada oo uu cudurku dillaacay, tirada rakaabku waxay hoos ugu dhacday tallaabo talaabo talaabo ah. Citizens; Tirada rakaabku waxay hoos u dhacday kalabar sababtuna tahay inuu gurigiisa joogo, u weecday gaariga halkii laga raaco gaadiidka dadweynaha ama uusan aadin haddii aysan lagama maarmaan ahayn. Waxaa la sheegay in ay dhici karto inbadan.
Tirada rakaabku waxay hoos ugu dhacday YHT. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir-Istanbul, Konya-Eskişehir-Istanbul tareennada xawaaraha-xawaaraha ku socdaa 48 jeer maalintii xagaaga iyo 44 xilliga qaboobaha. Maalin walba, 22 kun oo rakaab ayaa loo adeegaa. Hadafka ayaa ahaa in la gaaro 30 kun oo rakaab ah dhamaadka sanadkan.
Si kastaba ha noqotee, daacuunka 'coronavirus' awgeed, tirada rakaabka ee loo yaqaan 'YHTs' ayaa waxyar hoos u dhacday. Sidii Marmaray, layaab maahan in hoos u dhaca tirada dadka rakaabka ah ay kusii socdaan YHT.
GUDDIN LAMBARKA TALOOYINKA KU SAABSAN AGENDA
TCDD Tasimacilik wuxuu si dhaw ula socdaa dhaqdhaqaaqa rakaabka. Agaasinka guud wuxuu qaabilay tirada duullimaadyadii Marmaray iyo YHT iyadoo la waafajinayo xaalada cusub. Qaab dhismeedka xogta cusub, waxaa loo qorsheeyay in la dhimo tirada safarada.
Ilo, oo sheegaya in rakaab aan la dulmarin doonin ayaa loo qaadi doonaa si looga jawaabo baahida maalinlaha ah, “Waxaan raacaynaa nidaamka hadda. Marka loo eego horumarada, diyaarinno lama huraan ayaa lagu sameyn doonaa tirada safarada ”.
Mashruuca Horumarinta Nidaamka Magaala Xeebeedka Izmir ee Magaalooyinka
Ku dhawaaqida ku saabsan kordhinta Khadka 'Zaanan' ilaa Selçuk ikinci
Tirada Khadadka Basaska iyo Socdaallada ayaa Kordhi doona Furitaanka Iskuulada Denizli
YHT ee Izmit ayaa hoos u dhacay
Kastamonu Castle iyo Clock Tower waxaa lagu qorsheynayaa in lagu dhiso baabuurta fiilooyinka
Raiiselwasaaraha Erdogan Baba Ocağı Gğıneysu's Cable Car to Handüzü Plateau…
Ankara Eskisehir khadadka socdaalka
Ankara-Eskişehir-Istanbul YHT Dalxiisyada
Konya-Eskişehir-Istanbul YHT Dalxiisyada
Lambarka Duulista Marmaray
Nambarada safarka ee loo yaqaan 'NYT'
Tirada duullimaadyada 'YHT'
Go'aanka Flash: Dhakhaatiirta Helitaanka Tababar Khaas ah oo Ku Saabsan Shaqada La Dagaalanka Fayras